Mmetụ mbụ, Ikpeazụ Aka, Multi-Touch | Martech Zone
Nchịkọta na-agba ọsọ dị ka usoro ịzụ ahịa nke ndị na-azụ ahịa na-esiwanye ike. M na nso nso a kwuru na ihe omume ebe m kọwara otú ọtụtụ ndị mmadụ na-eche banyere ahịa na ahịa… na anyị na-akọ usoro n'ezie na-adịghị kpafuru akpafu ndị a:
Ọtụtụ n'ime sistemụ ndị a na-eji usoro nke mbụ na aka ikpeazụ:
Akpa aka - Gini bu mbu mbu ma obu mgbe emere ka olile anya ahu di na ahia, ahia ma obu oru nke dubara ha na uzo ntughari ka ha buru onye ahia?
Ikpeazụ Touch - Gini bu ihe nwuru anwu mgbe emere ka olile anya ahu di na ahia, ahia ma obu oru nke dubara ha na uzo ntughari ka ha buru onye ahia?
Nke a anaghị arụ ọrụ ọzọ. Ihe mgbagwoju anya nke otutu ngwaọrụ, na ya na njikọ ya na ntanetị, na ndị ahịa na azụmaahịa na-eme nyocha site na weebụ na-agbanwe ụzọ anyị si agbanwe ndị ahịa.
Nke a bụ ndapụta. Companylọ ọrụ gị na-akwado mmemme ahịa ahịa nke atụmanya gị gara ma ha jikọtara ya na ndị ahịa gị. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ekele dị ukwuu email-kachasị nke email, ha budatara akwụkwọ akụkọ na ihe ọmụmụ nke kọwara ụlọ ọrụ ha na ihe ha na-achọ ime. Ha jụrụ ha na netwọkụ mmekọrịta ha gbasara ngwaahịa na ọrụ gị - wee debanye aha maka ngosipụta. Mgbe ngagharị ahụ gasịrị, ha bịanyere aka.
N'ọnọdụ ahụ, olee ihe ị na-ekwu na nloghachi gị na itinye ego? Ọ bụ ihe omume (mmetụ mbụ)? Onye ahia? Akwụkwọ akụkọ ahụ? Okwu ikpe? Mmetụta ndị mmadụ? Ma ọ bụ na ọ bụ ihe ngosi weebụ (mmetụ ikpeazụ)?
Azịza ya bụ na ọ chọrọ ọwa niile a na ihe omume iji mee ka atụmanya ahụ gbanwee. Anyị bụ isi nchịkọta nyiwe ezughi oke iji nye nyocha ọnụọgụ nke mbọ anyị mejuputara iji wepụta usoro amụma anyị nwere ike ime.
Azịza ya, ọ dị nwute, bụ na anyị enweghị ike ileghara ọwa ọ bụla anya ma anyị ga-ekweta na nke ọ bụla nwere mmetụta ngosi na mgbali ahịa anyị niile. Ego ole? Nke ahụ bụ ihe enyere onye na - eme mkpebi azụmaahịa aka ma ghazie idozi ya.
Ma enwere ike ọnweghị pasent etinyere nke ziri ezi maka ụlọ ọrụ gị. Ọtụtụ ihe ịga nke ọma gị nwere ike ịdabere na akụ dị ugbu a. Ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike ịchọpụta na ịmejuputa atumatu ndị ọzọ na-emepụta nke ọma. Organizationstù ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọpụta na ịkpọkwu nọmba ekwentị na-arụpụta ezigbo ihe.
M na-atụ anya ụbọchị na Analytics ọ bụghị naanị idekọ nsonaazụ nke ọrụ anyị, mana ọ na-echebara ọrụ ahụ n'onwe ya echiche. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbanye na mkpọsa ahụ na ụgwọ ha, anyị nwere ike ịhụ etu mkpụrụ nke ọrụ anyị si na-akwụ ụgwọ. Anyị ga-enwe ike ikpebi ihe mmetụta ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na anyị abawanye ma ọ bụ belata otu akụkụ nke atụmatụ anyị nwere ọtụtụ ọwa.
Tags: obe-ọwambụ emetụikpeazụ akaotutu ọwa
Mee 25, 2013 na 4: 02 AM